Telemark [²teːləmɑrk] (ku saabsan codkani wuxuu dhagaystaa) waa gobol dhaqameed iyo gobolka Norway, oo xuduud la leh Vestfold, Buskerud, Hordaland, Rogaland iyo Aust-Agder. Magaca waxaa loola jeedaa "calaamadda geedka", qabiilka Waqooyiga Jarmalka ee ku noolaa waxa hadda la yiraahdo Upper Telemark ee Migrationsverket iyo Viking Age. Taariikh ahaan Magaca Telemark oo kaliya ayaa loo gudbiyaa Upper Telemark, halka xeebaha degaanka ee casriga ah ayaa loo tixgeliyey gobollo kala duwan. Degmada casriga ah waxaa loo asaasay waagii Bratsberg ee waayadii dhexe, intii lagu guda jiray midawga Norway oo leh Danmark. Iyadoo hirgelinta Boqortooyada Qodobka 1662 waxay noqotay Degmo, waxaana Magacaabay Telemark 1919kii. Maamulka Gobalka Skien, oo ahaa xilligii ugu dambeeyay ee magaalada ugu muhiimsan ee Norwey ka hor Christiania.
Telemark sare ama Telemark waxay ku habboon tahay muuqaal muuqaal leh, oo leh buuro badan, buuro, dooxooyin iyo harooyin. Caadiyan waxaa ka maqan magaalooyinka waxaana lagu tilmaamaa caadooyinka dhaqameed ee kala duwan ee luuqadaha, muusikada, dharka, gacan-qabsiga, cuntada, naqshadeynta iyo dhaqankeeda dhaqan ahaaneed ee beeraleyda ah ee ku-meel-gaadhka ah ee ku nool da'da Viking. Waxay ka haysatay dhaqanka norwejiga iyo farcanka luqadaha oo ka badan gobollada kale ee Noorway, taariikhdaasna waxaa loo arkaa inay tahay bulshada ugu xoogan ee Norway. Gobolka ayaa ka horjeeda labadaba Masiixiyeynta iyo dib-u-soo-kabashada muddo ka badan gobollada kale ee Norway. Waxay leedahay dhismooyin badan oo ka soo jeeda wakhtiyada dhexe oo ka badan gobolka gobolka Noorway, waxaana loo yaqaanaa goobaha barafka iyo dhaqdhaqaaqa Bunad.
Grenland, meelaha xeebta ah ee xeebta casriga ah ee magaalooyinka casriga ah, waxaa caado u ah magaalooyinka hodanka ah iyo ka qaybqaadashada badda iyo ganacsiga wadamada Low, waqooyiga Jarmalka iyo Ingiriiska, oo leh dhaqammo badan oo magaalooyinka iyo qaaradda, sidoo kale saameyn ku yeelatay la xidhiidh Danmark. Waxa kale oo uu ahaa gobolka warshadaha ugu muhiimsan ee Norway tan iyo qarnigii 16aad, iyada oo la adeegsanaayo birta iyo warshadaha.
Degmada Telemark waxay la macaamilaysaa gobolka Vestfold ee gobolka Jeenawari 1, 2020 oo qayb ka ah dib-u-habeyn goboleed oo heer gobol ah, si ay ugu noqoto qayb ka mid ah Telemark iyo Vestfold County.  
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Telemark&oldid=186204"